PCLinuxOS 2019.06 jiri Kernel 5.1 bịarute na mmelite ndị ọzọ | Site na Linux
PCLinuxOS 2019.06 jiri Kernel 5.1 bịarute na mmelite ndị ọzọ
Na nso nso e wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke Linux na-ekesa PCLinuxOS 2019.06, nke bịara nanị dị ka mmelite nke usoro ihe. Nke a bụ ka ndị ọrụ ọhụụ ghara ibudata ọnụọgụ nchịkọta ndị ọzọ agbanyeghị na ibudatara onyonyo sistemụ ahụ.
PCLinuxOS Ọ bụ nkesa Linux nke buuru ụzọ ndabere nke Mandriva Linux, mana emesịa banye na ọrụ dị iche.
PCLinuxOS dị iche n'iji Debian GNU / Linux APT ngwugwu njikwa nchịkọta ngwakọta na njikwa RPM njikwa, nke bụ nke klaasị nke nkesa ekwentị ebe a na-ewepụta mmelite ngwugwu oge niile na onye ọrụ nwere ike Nweta nsụgharị ngwanrọ kachasị ọhụrụ na-echeghị.
Ihe nchekwa PCLOSOS nwere ihe ngwugwu 14,000.
E wezụga ya PCLinuxOS nwere edemede a na-akpọ mylivecd, nke na-enye onye ọrụ ohere iwepu 'snapshot' nke nrụnye ha. sistemụ dị ugbu a (ntọala niile, ngwa, dọkụmentị, wdg) wee tinye ya na onyo CD, DVD ma ọ bụ USB ISO.
Nke a na - enye onye ọrụ ohere ime ndabere mfe nke a onye ọrụ data na-emekwa ka ọ dị mfe ike gị omenala LiveCD, DVD ma ọ bụ USB.
A na-etinyekwa ngwá ọrụ nyocha ebe nchekwa dị elu na menu mmalite, na-enye ndị ọrụ dị elu ohere ịgbanwe kernel parameters, ndị ọkwọ ụgbọala, ma jiri usoro eserese echedo ma ọ bụrụ na akwadoghị kaadị vidiyo ha.
Ọ bụ ezie na na PCLinuxOS Anyị nwere ike ịchọpụta na KDE bụ ebe desktọọpụ nke sistemụ ahụ, enwekwara ọzọ ọzọ nke bụ Mate. Yabụ ndị ọrụ ọhụụ nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ iji kDE ma ọ bụ di na nwunye budata ihe onyonyo a.
Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na gburugburu ebe a enweghị mmasị, ị kwesịrị ịma na iche iche, obodo dị na nkesa Linux a na-ewepụta nsụgharị yana gburugburu desktọọpụ ndị ọzọ. Owuwu obodo mebere na Xfce, MATE, LXQt, LXDE na ato n’otu n’otu.
1 Kedu ihe dị ọhụrụ na PCLinuxOS 2019.06?
2 Budata ma nweta PCLinuxOS 2019.06
Kedu ihe dị ọhụrụ na PCLinuxOS 2019.06?
Site na mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke PCLinuxOS 2019.06 Dịka anyị kwuburu na mbido, ụdị emelitere nke ọtụtụ sistemụ sistemụ abata.
Site na nke a anyị nwere ike ịkọwapụta ụdị ọhụrụ nke Linux kernel 5.1 nke na-agbakwunye njikarịcha dị iche iche na karịa nkwado niile maka ọtụtụ ihe maka usoro.
N'aka nke ọzọ, ngwa ndị emelitere, anyị nwere ike ịchọta nsụgharị ọhụrụ nke sistemu desktọọpụ sistemụ KDE 19.04.2, KDE Frameworks 5.59.0, na KDE Plasma 5.16.0.
Ihe ngwugwu bu ihe omuma dika Oge ntinye oge, Bitwarden Password Manager, Sistem Nhazi Foto Darktable, GIMP Image Editor, Digikam Nchịkọta Ihe Nlekọta Ihe Nlekọta, Megasync Cloud Data Synchronization Utility, Teamviewer remote access control system, Rambox application management system, Simplenotes note-taking software, Kodi media center, Caliber e-book interface interface, Skrooge ego package, Firefox nchọgharị, Thunderbird email client, Strawberry Spruce music player na VLC video player.
Budata ma nweta PCLinuxOS 2019.06
Ọ bụrụ na ị bụghị onye ọrụ nke nkesa ma chọọ iji ya na kọmputa gị ma ọ bụ nwalee ya na igwe arụmọrụ.
Nwere ike nweta ihe oyiyi sistemụ, Only ga-aga na gọọmentị weebụsaịtị nke ọrụ ahụ ebe i nwere ike ịchọta njikọ ya na ngalaba nbudata ya.
Njikọ bụ dị ka ndị a.
Ezubere onyonyo sistemụ ị ga - ahụ maka iji ya rụọ ọrụ, mana ọ na - akwado ntinye na diski ike.
Ihe zuru ezu (1.8 GB) na belata (916 MB) nke nkesa na-adabere na gburugburu ebe obibi desktọọpụ KDE dị njikere maka nbudata.
Nwere ike ịchekwa onyonyo sistemụ na ngwaọrụ USB site na enyemaka nke Etcher nke bụ ngwaọrụ ọtụtụ ma ọ bụ ị nwekwara ike ịhọrọ unetbootin.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » PCLinuxOS 2019.06 jiri Kernel 5.1 bịarute na mmelite ndị ọzọ
Ihe nbudata vidiyo, ngwa iji budata vidiyo YouTube na ụzọ dị mfe
RHEL8: distro ohuru maka oru ohuru